नेकपा एकताबारे खुल्याे अहिले सम्मकै ठुलाे रहस्य, उपप्रधान-मन्त्रीसहित दर्जन नेताले किन गरेन पार्टी एकतामा हस्ताक्षर? -
नेकपा एकताबारे खुल्याे अहिले सम्मकै ठुलाे रहस्य, उपप्रधान-मन्त्रीसहित दर्जन नेताले किन गरेन पार्टी एकतामा हस्ताक्षर?
८ असार २०७५, शुक्रबार ०८:४३ 806 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकप) एकीकरणको निर्णयमा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र केही प्रभावशाली नेतासहित एक दर्जन नेताले अझै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । पार्टी एकता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि पोखरेलसहित केही प्रभावशाली नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।
केही सदस्यको हस्ताक्षर भने विदेश तथा काठमाडौंबाहिर रहेका कारण छुटेको छ । एकताजस्तो ऐतिहासिक निर्णयमा हस्ताक्षर छुटाएको भन्दै पोखरेलसहितका नेताहरूलाई प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ ।